Mhinduro Kune Fog Stain Pane Yako Aluminium iMac | Ndinobva mac
jaca101 | | apuro, IMac, Mac Os X, Noticias
Pamasaiti mazhinji mublogosphere nemaforamu ndakaverenga nezve yakakwana iMac kuchinjana newaranti, kutengwa kwezvinodzima mweya uye yakawanda yemapofu matanda ekugadzirisa dambudziko rekutsvaira paMac magirazi.
Mhinduro yacho yakapusa zvekuti inofanirwa kuuya mumirayiridzo sezvo isingade chero chakakosha.
Haisi mhinduro yedambudziko, iri pamusoro pekuchenesa girazi nenzira yakasununguka.
Girazi reMac rakanamatirwa nemagineti saka isu tinongofanirwa kuridhonza, nekuti izvi tichashandisa mukombe chaiwo wekukweva unoshandiswa kuturika mamvemve kubva kumatiles ekicheni kana mukombe wekuyamwa wemota GPS mbichana; chero mhando yekusveta mukombe ichaita. (Kana iwe usina mukombe wekukweva, shandisa pepa re cellophane, uchigadzira mubato wakagadziridzwa pakati)
Isu tinonamira mukombe wekukweva mukona yegirazi uye ndokukanda
Isu tinosuka girazi musinki yekubikira (nemucheka kune mhute yakaumbwa, zvakanaka asi isu tatotora mukana kuichenesa)
tinoomesa nejira kana kuisiya ichiomesa panosukirwa ndiro
takadzorera girazi panzvimbo
Sezviri nyore seizvozvo.
Ichokwadi, dambudziko rinobva mukukanganisa dhizaini muMac asi ini ndinofunga mhinduro yacho iri nyore zvekuti, kwandiri, haina kukodzera kurwira naApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » Mhinduro kumaturu emhute paMac aluminium
Alberto Rojas akadaro
Uye iwe unogona sei kuchenesa mhute uye fungus mukati mezviratidzo zveiyo macbook pro? Ndatenda uye ndiani anogona kundipa mhinduro yedambudziko iri
Pindura kuna Alberto Rojas
Ini handizive, ini ndinoona mhinduro iri nyore zvekuti zvine hunyengeri hehehe. Ndiri kureva, iwe unogona kukwanisa kuchenesa girazi, asi hausi kutadzisa guruva kupinda mukati apo rakavhurika. Isu hatinyatso kuziva kuti izvi zvinokanganisa sei imac.
Ini handina mubvunzo kuti mhinduro yako inoshanda, ndeyekuti zviri nyore kwazvo kuti pamwe ndosaka ndisina chokwadi
@Jose Ngatimboonai, chinhu chiri mudhirowa, chiri kuseri kwegirazi rakanaka hachisi chinhu chinopfuura generic glosy monitor, ngatiendei kana ikabata guruva kubva pakubviswa girazi kwemaminetsi mashoma iwe unoichenesa sechero imwe isingauyi girazi.
@Alberto Rojas Chokwadi ndechekuti ini handizive mabudiro egirazi kubva kune nyowani MacBook pro, ini handina kana imwe yekuyedza. Handifunge kuti inoendawo nemagineti ane nzvimbo diki diki asi pamwe iine mhando yezvikoko kana chimwe chinhu, wakamboedza kudhonza nekapu yekuyamwa kuti uone zvinoitika?
Pindura kuna jaca101
Zviri nyore, zviri nyore nekapu kadiki yekukweva. Ndakanga, ndine zvisaririra mwando. Rega nditsanangure, pachiratidziro kuchine zvisaririra zvishoma muchikamu chepamusoro, icho chakaitikawo nechivharo chegirazi, idzi, ndangodzidzima izvozvi, asi zvimwe? Zvisinei, ini handizive kana zviri zvinopfuura dhizaini yekugadzira ... Chero mazano? ndatenda.
@Felipe iwe unoti kune hunyoro PASI peyekutarisisa iko kujeka kwakapenya pamwe negirazi ??? nekuti kana iri pamusoro, inocheneswa senge chero imwe yekutarisa, kana iwe uchida nemhando iyoyo yefuro yekuchenesa ma monitor ...
Iyo skrini pane yangu MacBook Pro ndeye 17 XNUMX. Uye mhute uye makwapa ari mukati kana pasi, kwete pamusoro. Zvinotaridza kwandiri kuti zvinofanirwa kubviswa kubva mukamuri. Pane munhu angashinga kuita bvunzo here?
@Alberto Rojas Asi… pa17? Macbook pro? Haisi Unibody, hongu, isu hatina girazi pamberi, chete skrini ... zvakanaka, mhinduro yakaipa, ndinofunga dambudziko rako ratove Apple ...
Haisi unibody, iri 2.33 GHz.Ndakafungidzira chiri chimwe chinhu chakaomarara. Iwe haugone kufungidzira matambudziko kana uchidzokorodza mapikicha, chipoko nhema matema kwese kwese. Kuna Apple ipapo.
Kana uine madema madema imhaka yekuti ine mapikisheni akafa, kuna Apple asi ikozvino!
Iwo madonhwe anotaridzika zvakanyanya kunge asina kujairika, asina kuumbwa marara kunge fungi ayo anoonekwa mukati memifananidzo lenzi.
Joer izvo zvisina kujairika… kuna Apple!
Mhoroi mose. Kubvisa iyo skrini ndiyo mhinduro inoshanda zvakanyanya uye inogara kwenguva refu, asi kune imwezve mhinduro inokurumidza pasina kukosha kwekubvisa iyo skrini: tora chinomesa bvudzi uye furidza mweya unopisa wakanangana neiyo imac skrini, mumasekondi mashoma pachave nekudzora kushayikwa. Sezvandinotaura, iyi inokurumidza uye inoshanda mhinduro, asi mushure menguva nguva, mavara acho anozoonekazve kana nzvimbo yacho yakanyorova kwazvo. Kwaziso.
Mhoroi ini ndaida kubvunza kana kubvisa girazi, kupenya kunopisa kunonyangarika.
Hahahaha… .., imi vashandisi veMac, ndinovawana vasinganakidze.
Ini handinganzwisise, hongu, wadii iwewo kuisa girazi mudhishi rekuwachira riine ultra calgonit.
Iwe murume, chokwadi ndechekuti ichi chikanganiso chisingaregererwi, dai ndakatenga imwe ndikabhadhara mazana mazana manomwe emadhora kuti ndive nematambudziko aya, ndinenge ndichishevedzera mudenga. Uye ini handisi ndakarasika windows mushandisi uyo asingaite chinhu asi anotsoropodza apuro, pane zvinopesana, mushure mekutambura ne win vista ndiri kuda kutenga imac, asi ndichiona kutadza uku uye imwe inoita kunge iri kupa nevatyairi vegirafu Ini ndoda kumirira kuti ndione kana vachizvigadzirisa, kubvira 1700 euros iyo modhi iyo ini yandinoda mari, haishandiswe zuva rega rega.
Iwe, vashandisi vemaapuro, unofanirwa kunyunyuta zvakanyanya kana chimwe chezvigadzirwa zvemaapuro chakaremara kana chakakanganisa zvakanyanya, nekuti neiyi nzira apuro yaizotarisira zvakanyanya kugutsa nekubhadhara vashandisi vayo. Asi kana zvichipesana, vanoita sezvavanoita, vachiratidza kugutsikana uye kurudyi kugutsikana kwechigadzirwa uye kunyange dzimwe nguva, vachichinja zvayakaipira kuita hunhu (mune iyo iPhone), zvakajairika kuti kambani haina kuisa mabhatiri pa 200% Kugadzirisa matambudziko.
Ini ndinokuudza kuti chinhu chacho chakagadziriswa nyore nyore. Sezvo ini ndine Apple Kuchengeta, Apple yakachinja yangu skrini yemahara.
Ehe, nekuti hausi zvakare kuisa girazi mudhishi rekuwachira riine ultra calgonit.
Sakura, mira zvisina basa, pfungwa yemashoko ndeyekuti inobereka uye inobatsira, saka tinonyatsobatsirana.
Dambudziko rangu rakati omei, ndine mutsetse wakaringana wakatsetseka neruvara rwakasviba, ruvara rumwe chete nemhute, kuzasi kuruboshwe, mutsetse unoyera masendimita masere sekunge ndakaridhonza nemutongi, uye rinokwanisa chete kuonekwa nemavara akajeka…. Dzimwe nguva inonyangarika kana mac yanga yadzima kwemazuva, ndinoibatidza uye haipo, asi inotanga kuratidza nemaawa uye inowoneka zvishoma nezvishoma iyo yakareba iyo nguva pasina kudzima makina. Kutaura chokwadi, ndikachenesa girazi, km inoita kunge stale metrakilate, uye ini ndakaisiya yakajeka kupfuura goridhe, asi zvinosuwisa kuti ndinoona iri kuseri kwetft, uye handidi kuvhura mac kuti ndichenese tft Kubva kumashure, ini handizive nezve vanhu, asi zvinoratidza zvakawanda, uye ini ndiri grafiki dhizaini uye zvinogumbura, pamusoro pekuti ini ndiri ostia d miticulous nezvinhu izvi uye mutengo wemakina hausi wakachipa chaizvo…. kuvonga kune vese
Fonsi, iwe uchaona mu lcd monitors, kupenya uye mavara zvinogadzirwa nenzira dzakasiyana, zvinoitika kuti mavara akagadzirwa nemapikisheni eiyo lcd, asi kupenya kunokonzerwa nemarambi akatwasuka kuseri kwawo, saka kana mhosva yako iri imwe yemarambi aya unofanirwa kubata apuro
Yep, yako TFT yakaputsika, iwe unofanirwa kuigadzirisa uye inofanira kuvharwa newarandi.
Mhoro zvakanaka kwazvo, ndine iMac 24, 2.8 uye ati radeon nezvimwewo nezvimwewo.
Kufanana nevanhu vazhinji ... ini ndakawana akasviba anofara mukati meplaccarbonate ndiro ...
Iyo Samsung yekutarisa uye iyo yepamusoro-dhiraivha yakundikanawo ini ... asi ndiyo imwe nyaya.
Kunyangwe pazasi pevimbiso ivo vakachinja girazi nguva dzese bvute rikabuda mukona yekumusoro kuruboshwe.
Mukufamba kwangu kwakasiyana siyana kuenda ku ktuin ndaigona kuona mu technical service line yakati wandei iMac yakafanana neyangu nemufananidzo mumwe chete wakajeka ... Renoir chaiyo ... michero yekupisa kwakanyanya ..
Tatova kunze kwewaranti ... tsvina dzakatora mazuva maviri chete matatu kuti vaoneke ...
Naizvozvo, ndaona yekutarisa ichiputsa ... ndakazviisa panjodzi ...
Ini ndakaita kusarudzika uye dzimwe mhinduro asi hapana yakashanda ...
Uku kwave kuri kuedza kwangu kwekupedzisira kubvisa fivha yemukomana wangu ... saka ndakamubaya ...
Kuedza kuponesa hupenyu hwake ... Ini ndakazvisarudzira nekadhibhodhi yakakosha sosi ndiyo chaiyo mhosva ... yezvinhu zvese ... zvakanyanya kupisa ... zvakanyanya ... ndinoti hapana injinjini akafunga kuisa sosi senge Mac mini ??, ...
Parizvino iri kutotenderera uye kupisa kunobuda uko kunopisa nekumashure .. Ini ndinofunga kuti iko kupisa kwese mukati kunoparadza zvakanyanya uye zvakanyanya nechengetedzo yerudzi urwu ...
Kana zvikashanda, chimwe chinhu chandisingazive ini .. ndinokuudza ... Kwaziso!
Pindura kuna Socrates
Zano rakanaka murume asi kubva pawakakwira waigona kuve wakanangana nekugadzirisa zviboora zvishoma kuti uzviwane chaiko.
Mhoroi, kana chiboorera chakatsvedza zvishoma ... asi chakashanda, iyo skrini haina kushatisa zvakare, inoshanda zvakare inotonhorera, kupisa kunobuda mune sosi kunoorora ... pamwe kuchandigonesa kumwe kudhonza ... kwaziso!
Rinenge richiri zano rakanaka kutara maburi emakomba kare kuitira kuti risazotsauka paunotanga kuboora. Kune zvakare software, imwe Fan Control iyo inokutendera iwe kumisikidza vateveri vemakomputa pane imwe spidhi yekumanikidza mweya yakawanda kuti ibude munzvimbo yepamusoro, kunyangwe iMac ingaite ruzha ipapo uye haina kutonhorera ...
Izvozvi ini ndangotera mukuda kuziva ndokuiisa kuti ndiyedze ruzha. Hongu, zvinonzwika kuti hongu, asi tembiricha inomaka iyo yadonha madhigirii makumi maviri nematatu, kubva pa23 yadonha kusvika pamakumi mashanu. Ndinoibvisa nekuti handina basa kana ichipisa, haina kurira uye handifariri, zvakare iyo yakakwana tembiricha yebasa realbum rakaoma iri 73º zvirinani pasina fan fan.
Mary uye. akadaro
Ndatenda!!! Ini ndanga ndisiri pamba nekuda kweKisimusi uye nechando icho chiri kuita, pandakadzoka ndakawana girazi reMac rangu rakazara mukati. Ndinoonga ichi chinyorwa nekuti mushure mekuverenga akati wandei mablog uye maforamu ndakafunga kuti zvingave zvakaoma kugadzirisa ...
Ndakaburitsa girazi rekudzivirira pasina matambudziko, ndikarichenesa nyore uye sekutaura kwaanoti, rakaiswa roga.
Ndanga ndiine Mac kwenguva pfupi uye ndinoida. Iwe unogona kutsoropodza, hapana chinhu chakakwana muhupenyu huno (ngatiregei kuva vapapa kupfuura Papa). Asi zviri pachena kwandiri kuti uko Apple ine mhosho panogara paine mhinduro iri nyore uye inoshanda.
Pindura María E.
Ndabvarura girazi rinoonekera rino chengetedza, ndakaenderera mberi nekurichenesa mukati nekunze, uye ndichine mavara anofadza. Iyo yekuchenesa yakaitwa zvakanyatsonaka, nemvura, isopropyl doro, yakawanda mvura, kuomesa uye chamois. Ini ndakatozvinyora kuti ndiongorore gare gare, uye hapana kana zvachose. Iwo mavara ari mukati mekutarisa. Ndatopererwa….
Pindura kuna alexuco
Izvo hazvichisiri steam, ivo utsi.
iwe unofanirwa kupatsanura chifukidziro checomputer uye kuichenesa asi izvi zvanyanya kutoshinga. Zvakaitika kwandiri ndichiedza iyo smc fan kudzora iyo nekufefetisa yakawanda kupisa yakakwira kumusoro kweti tarisa uye yakasviba.
Mhoro vatinoshanda navo kubva kune fivhiri yezvinhu izvi zvinoshamisa Hei, ndine 15-inch aluminium macbookpro, uye mashoma mwenje mavara akaonekwa pachiratidziro munguva pfupi yapfuura, maviri acho, asi ivo vanongori pamusoro pe "control bar" (faira, edit, tarisa, nhoroondo, nezvimwe. .). Ini ndinopenga uye ndinofarira kugadzira zvimwe, saka mac yangu paakanyanya kupisa uye akamira pakupa vhidhiyo kana imwe nzira inorema, ndakatsvaga mhinduro yekuitonhodza nemvura, pazasi, nehurongwa hunoshanduka kubva padiki tsime rekugadzira (idiki mota inoburitsa mvura kubva mugirazi, ndokuitumira kugirazi kuburikidza nepombi refu; ini ndakaisa payipi mumhepo pasi peMac uye voila, iyo yekutanga mvura-yakatonhorera mac yakati ...) kunze kwenzvimbo dzechiedza pabhawa rekutonga pane zvakare mhando yekukanda kadiki mukati, iri muchikamu chezasi chekuruboshwe kwechidzitiro; yakaonekwawo nguva pfupi yadarika.
Kunze kwedhata dzese idzi, ini ndichakuudza kuti ndinoshandisa komputa maawa masere akateedzana kana kupfuura nekuti ndinofarira kushanda husiku hwese, dzimwe nguva ndaiipisa zvekuti system (osx) inopenga, uye inopa kutadza kunyangwe mushure mekuidzima uye nekuenderera kwemaawa gare gare, asi izvi zvakaitika kanoverengeka uye zvakazvigadzirisa.
Ndokumbirawo mundibatsire, ini ndiri mudzidzi, uye kana muchina uyu ukamiswa handifunge kuti ndinogona kutenga imwe kwenguva yakareba. BATSIRA !!!!!!!! ndatenda shamwari.
Kwaziso kubva kuSouth America.
Pindura kuna calamaro
musikana wangu ndeye 15 inch macbookpro, 1.83Ghz intel core duo,
2 GB 667 Mhz DDR2 SDRAM, uye ine makore akati wandei, ndiri muridzi wayo wechipiri, saka ndakaitenga kechipiri. munguva pfupi yapfuura ndakachinja bhatiri kune yakachipa kwazvo Chinese generic, uye imwe nguva yapfuura ndakachinja memori kadhi kune rauinaro izvozvi.
mumwe mubvunzo: unoyera sei tembiricha yemacbook ako; Ndingazvigona here nemuedzo unounza basa rekupima tembiricha? Ndeipi yakakwana kana yakasarudzika tembiricha yekushanda? Ko kana ndikakwanisa kushandisa muyedzo kuyera tembiricha kwandinoisa sensor? mune chikamu chipi checomputer chandinoisa iyo tester sensor? chikamu icho macbook yangu inopisa zvakanyanya chiri pazasi, pakati pebhatiri uye kumucheto uko iko skrini.
(uyu ndiye musikana wangu):
Muenzaniso Zita: MacBook Pro 15 ″
Model Chitupa: MacBookPro1,1
Processor Izita: Intel Core Duo
Processor Kumhanyisa: 1.83 GHz
Nhamba Yeva processor: 1
Yakazara Nhamba YeMakoresi: 2
Chiyeuchidzo: 2 GB
Kumhanya kweBhazi: 667 MHz
Boot ROM Shanduro: MBP11.0055.B08
SMC Shanduro (system): 1.2f10
Serial Nhamba (system): W86110R0VJ0
Kamwe kamwe Motion Sensor:
Pane chero munhu akambonzwa nezvechirongwa chinogona kugadzirisa machena machena anonzi "Pixel Gadzirisa" ???
Pane chero munhu anoziva kuishandisa ????
mune imwe foramu vanoti iwo mabara ari kukonzerwa nenyaya yekuti maTransistors akati wandei (kana chero zvavanodaidzwa) eavo vanodzora mapikisheni havachadzoreke, vanodaro ipapo, kuti Pixel Fix inogona kuigadzirisazve.
shit rubatsiro !!!!!!!!! basa rangu rekuyunivhesiti rinoenderana nemuchina uyu uye ini ndichiri kuda kumonera bhinzi (saka tinotaura pano).
usanditende fag, ndeyekuti ini ndinodzidza audiovisual media ini ndinotaura nezve cinema, kutora mifananidzo, uye vhidhiyo; Ini chaizvo ndinoshanda nedhijitari yekugadzirisa mifananidzo, uye shit kana iyo skrini ikakwidzwa kumusoro, zvinonyatsondibata zvakanyanya.
zvakanaka ndatenda zvakare zvakare hama diki.
(shamwari ndakawana izvi, asi uchindipindura ndapota):
Une plasma kana LCD yekutarisa nepikisi yakanamatira (haimbo shandure ruvara)?
Iva nemonitor ine dot iyo inogara ichiita sediki kupenya kana kuderera zvishoma pane iyo yese skrini.
Saka pamwe izvo zvaunazvo ndeimwe kana anopfuura akasungwa mapikiseli.
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti isu hatisi kutaura nezve vakafa mapikisheni.
Iyo pixel yakafa inowanzo kuve inoita kunge yakasviba zvachose zvisinei nekuti chii chinoitika pane iyo skrini yese; ndiko kuti, rakafa, risina ruvara.
Kuvhara kwepikisi kunogona kukonzerwa nekusagadzikana kweiyo transistor kana nekuparadzira kusingaenzanisike kwekristaro yemvura kana plasma.
Kana iwe uine dambudziko iri, pane nzira iri nyore yekuyedza kuigadzirisa:
* Bvisa komputa uye tarisa. Uchishandisa jira nyoro kana jira, isa kumanikidza kumanikidza kunzvimbo yedambudziko.
Ita shuwa kuti usamanikidze kune zvimwe zvikamu zveiyo yekutarisa, sezvo iwe uchikonzera matambudziko mune mamwe matunhu
* Paunenge uchimanikidza, batidza tarisa uye komputa.
* Bvisa jira uye netarisiro kuti pikisi yakanamatira yadzokera kune yakajairwa.
* Iko kumanikidza kunobatsira kuparadzira mvura yakatenderedza nzvimbo panogona kunamira imwe kana mamwe mapikiseli. Kana izvi zvikasagadzirisa dambudziko, usakanda mapfumo pasi.
Unogona kuyedza software yekugadzirisa, senge JScreenFix kana UDPixel, nekudzvanya pane zvinongedzo pazasi:
Ziva kuti iyo nzira ichangotsanangurwa inoshanda chete kune yakanamatira mapikiseli, asi haizoshandire mapikisheni akafa.
Zvakare, nepo ichiita kunge iine chikamu chakakura chekushandisa, zvakakodzera kuti uzive kuti pane nguva apo mapikiseli akasungwa haazodi kudzokera kune zvakajairika neiyi nzira.
Calamaro: Tora iyo MBP iparadzanise uye uchenese mairi mairi. Hazvina kujairika kuti ipise zvekuti inotyaira OS X kupenga.
Ndakave nemumwe weavo vanoshanda maawa makumi maviri nemana pazuva, kusvika nguva yekukwira kwemwedzi yakati wandei mumutsara.
Inonakidza kwazvo nezve mapikisheni akafa, nenzira ... ndichaedza. Ine pfungwa dzayo.
JACA101, kana sekutaura kwako ivo vari hutsi kwete hutsi, wakazvigadzirisa sei? Kana ndichifanira kubvarura nyaya, hapana dambudziko. Asi ini ndaona chidzidzo chakabvarura icho chose uye ndinofunga kuti handikwanise kuwana zvakapfuura zvandakaita. Ndiri kureva kuti kana iri yekutarisa hapachina. Zvingave zvakasiyana kana ini ndichida kumbomira chimwe chinhu, asi kana iwe wabvisa iyo glossy dziviriro, chii chimwe chaungaite ???
Semuenzaniso, ndinokusiira iyo yataidzidzisa yandakashandira chero yainogona kushandira, kana kana mumwe munhu akafunga mabviro andingaita kusvibisa hutsi hwangu.
Zvakanaka, ini handisati ndafunga kuzvigadzirisa izvozvi, asi ndichadaro.
Zuva randinoita ndichanyora vhidhiyo yezvinoitika.
Pa jaca101, mune chiitiko chekuti banga redu revanhu rinogona kugadziriswa, iwe unofunga kuti zvinofanirwa kuitwa sei? Ndokunge, kana iwe ukabvisa glossy kuti uwane iyo yekutarisa, uye yekupedzisira iine mavara mukati mayo, tichavachenesa sei? Ini handione mhinduro nekuti hapachina zvidimbu nepakati, iyo yekutarisa haina kukwana kuputika, zvirinani ndizvo zvandakaona.
Hapana chinhu chisingagonekwe ... Ndinoziva kuti mavara angu ari pasi pe glossy, pandinozvimisa ndichaisa vhidhiyo, kana gungano risingasvikike, saka zvinogona kunge zvichidikanwa kukanganisa uku, asi kana iko kukanganisa kuchikuvadza kushanda, ipapo ini ndinoyera mukana wekunyudza iyo yekutarisa muisopropyl doro kana imwe dielectric yemvura inogeza tsvina nekusangana.
Pamwe handina kuzvitsanangura zvakanaka, kana chimwe chinhu chinondipukunyuka. Muvhidhiyo yangu yandinotumira, iwe unogona kuona kuti ndinobvisa sei glossy. Zvakanaka, ndakachenesa zvese neisopropyl doro, uye hapana kana, nekuti iro banga rakanga risipo, asi mukati mechiono. Naizvozvo, kunyangwe ndikamupa zvakadii, aive asingabatsiri.
Mhinduro chete yandinoona ndeyekuti kunze kwekubvisa dziviriro yekutanga kana kupenya, iyo yekutarisa inogona kubviswa, asi zvinonzwika semazwi makuru kwandiri, uye kwete kunyangwe muvhidhiyo inomhanya online kubva kuApple technical service iri « intuited »Kuti iyo Monitor inogona kuputika. Ingazovewo njodzi.
Chero ani ane chero zano rebricomania?
Dai iwe wainge wakatsanangura iwe pachako zvakanaka, hongu ... ini ndichiri kureva kubvarura glosi kuzviongorora pachayo kubva mukati uye kana isingakwanise kuputika, nyudza zvachose mune dielectric mhinduro. Ini handifunge kuti zvinwiwa zvemaseru ane mavara, zvave zvisina mvura, zvinokanganiswa.
Saka iwe unofunga kuti isu tinofanirwa kunge tichive kubvisa girazi kubva pachiratidziro nguva dzese dzatinodzima komputa, nekuti mushure mekudzima mavara ehutu kana mweya unopisa unoonekwa zvakare. Ini handisi conformist senge iwe.
Iyi nzira yaunodzidzisa inogona kuitwawo paMac nyowani? Zvese zviri zviviri 21,5 kana 27 ″?
Alexuco, mhinduro yaunofunga, yaive yakakwana kwandiri uye iri nyore kwazvo kuitisa. Mumaminetsi mashoma, ini ndinogumisa masvondo mashoma ekutambudzika, ndichingofunga nezvechaji yangu 7-inch iMac Core i27 kubasa raApple, kunyangwe kana ichifukidzwa newadhiwarandi kweanopfuura makore maviri.
Ini handizive kuti zvinotora nguva yakareba sei zvisati zvaitika (akaparadzira mimvuri) kumusoro kwekuruboshwe uye nechezasi kurudyi kwetwhite kuzvidzokorora Pakuchenesa nesopropyl doro, ndakaona kuti jira racho raive nerakati ndoo nhema, saka ndinofungidzira kuti hwaive hunyoro uye humwe hutsi (ini ndinojekesa kuti ndiri fodya, zvingangoitika). Iko pamusoro pecustomer kwaive kusina mavara, sezvo aingova chete pagirazi rinodzivirira.
Ini ndinocherekedza kuti iMac yangu iriko invoice yekupedzisira ya2009, saka kuratidzwa kwegirazi kunosiyana zvishoma kubva pamuenzaniso unoshandiswa muvhidhiyo inotsanangura.
Ndatenda zvakare uye ini ndinokurudzira maitiro kune chero munhu ane hushoma hwekushinga.
Zano rakanaka kwazvo. Kunyangwe ini ndisingazive kana zvingave zvakashinga kutendeukira kwavari, asi zvirokwazvo kana paine dambudziko rakadai ... ini ndaizozviedza!
Ini ndakangoona pakanyorova pane yangu iMac skrini pazasi kurudyi. Ndakaverenga posvo netip, ndipe kupisa neyakaomesa, uye ndazviita. Asi ikozvino ndinotarisa zvakare uye handizive kana zviri izvo kuti handina kuita zvakanaka, kana kuti iko kuri kudzoka muchimiro!
Ndava kunotora dryer futi ... ¬¬
Rakanaka zano shamwari. Suction mukombe, suede uye kushanda zvakare. Uye nenzira, nakidzwa nekuona ivo Apple vakomana vachipedzisa zvemukati. Ndatenda
Mhoroi, ndine 21,5 imac kubva kupera kwa2009. Kuedza kubvisa girazi rinofara rinovhara chidzitiro, rakandityora nepakati ... Magineti aipomerwa apo ini ndakanga ndatoparadzaniswa, uye iyo iri mune imwe kona yaive yakasara neni. hafu yekristaro iri kune rumwe ruoko .. Zvisinei, pane munhu anoziva kwaunogona kutenga imwe kristaro? Ini handizive chii chinondipa kuti ndive nazvo sezvizvi pasina girazi, zvinoita sekunge iyo murombo chinhu chiri mumabasa
Yep, apa: http://www.ifixit.com/Apple-Parts/iMac-Intel-21-5-Inch-Glass-Panel-EMC-No-2308/IF173-001?utm_source=ifixit_cart&utm_medium=cart_product_link&utm_content=product_list
Zvishoma zvinodhura hongu ndizvo, asi wow ...
Hora: Ini ndangoona kuti chidimbu ichi chinoshanda chete muUSA.
Pamwe iwe unogona kukumbira Benotac kana chero apple premium mutengesi ane hunyanzvi sevhisi.
Mhoroi ini ndine dambudziko rakafanana nechiratidziro uye nemhepo yakaipa.
Ini ndaida kuziva kana mushure mekuichenesa dambudziko rakapera kana iwe unofanirwa kuzviita nguva nenguva. Ndatenda
Rinenge gore rapfuura, ndakatora girazi rekudzivirira iro rakasvibiswa nemhute ndikarichenesa zvine hungwaru. Iye zvino ndakadzokorora maitiro acho, sezvo nzvimbo dzakakomborerwa dzadzoka, asi nerombo rakaipa kuti uone kuti iyo skrini yaive zvakare isina simba asi inoonekwa nzvimbo, kwese kumucheto chaiko. Ndakaona kuti pandinovhura komputa, ino nzvimbo hainyatso kuoneka uye inowedzera sezvo girazi richipisa. Izvi zvinoshungurudza uye ini ndichatendeukira kune iyo waranti sevhisi ichiri kushanda, sezvo ini ndichitya kuti ichawedzera nekufamba kwenguva.
Pfungwa yangu ndeyekuti aya maMacs anounza kupisa kwakanyanya, kuti haatsakatise nemazvo sezvaanofanirwa. Ndinovimba kuti mamodheru achangoburwa ane mabhanan'ana emabhanan'ana akavandudza chinhu ichi (kusvika zvino zvinoita seni kuti vanazvo, asi handizive kusvika papi).
Tsika yangu yaive yekuchengetedza muchina maawa makumi maviri nemana pazuva, uchimhanyisa mapikicha emasiraidhi kana asiri kushandiswa. Ini ndinofunga kuti kushandisa hakuna kunaka kune aya chaiwo makomputa, saka ini ndinokurudzira kupokana nazvo.
Maonero angu ndeekuti zvakachengeteka kutenga sinema kuratidza kana kutinhira tarisa (iyo isingaburitse kupisa kwakawanda, pamwe) uye Macbook pro, semuenzaniso.
Chero bedzi iyo yekutarisa pachayo isina kushatiswa, iri zano rakanaka kutarisa girazi rekunze remhute nekurichenesa kakawanda pazvinenge zvichidikanwa. Kana iwe wakasvibiswa kamwe chete, unogona kutarisira kuti zviite zvakare.
Imwe pfungwa yandakambofunga nezvayo, ndeyekuisa dzinenge nhatu diki mafeni (senge iwo mamwe mavhidhiyo makadhi kana mapurosesa) munzvimbo dzakadzika dzeyekutarisa base, kuitira kumanikidza mweya kupinda mukati zvishoma kuenda mukati, kubatsira kushomeka kwebasa remukati kufefetedza system. Ndichazviita ndikangowana avo mafeni.
Huta hwemhute huchaonekwa chero bedzi mamiriro ekunze asiri "kugadziriswa"
Izvo zvakanyatsonaka: Kana zvikonzero zvikasachinja, mhedzisiro yacho inodzokorora. Nekudaro, pasi pemamiriro akafanana ezvemamiriro ekunze, ndakachengeta mimwe michina uye maonitore anoshanda mushe. Pasina kunetsa kwemhute yakaitika uye ichidzokororwa mu27 ″ iMac pakupera kwa2009. Zvinoitika kuti zvinokodzera kufungidzira kuti dhizaini yeiyi iMac inopa kutonhora kwekutonhora kana kumwe kushushikana kwechimiro, izvo zvinokonzeresa dambudziko rambotaurwa mune yakawanda nhamba yezvikamu izvi. Ini ndinofungidzira kuti haisi iyo nyaya yavo vese, izvo zvingadai zvakaisa Apple mumatambudziko akakomba. Uye ndinotarisira kuti chero zvodii, maMacs matsva ane mamwe ekugadzirisa ekudzivirira.Handina kunyatso kurasa chivimbo, sezvo ini ndakawana nyowani mazuva mashoma apfuura. Nekudaro, ini ndichaiona zvakanaka kana nhoroondo ichizvidzokorora, uyezve, ndichaedza kusaichengeta kana isiri kushandiswa, kwenguva refu, izvo zvandinoita zvisina tsarukano nemaWindows PC. Ini ndinotochengeta ziso pane 15-Macbook pro, zvakare ichangotengwa. Ndiine Mini ndakanga ndisina kana dambudziko, ndichishandisa generic yekutarisa, pasi pemamiriro akafanana ezvemamiriro ekunze, ndichiishandisa (sezvandinofunga kuita neMac) seodhiyo nevhidhiyo server, kwemaawa mazhinji pazuva.
DAMBUDZIKO NDERE KUZVININIPISA, NDAKAONA KUTI NDIPONESE DAMP HOFUKO UYE IMWE YEMAKONA ANOPA STAINS, NDINOBVISA Girazi uye HAKUSHANDI KUSVIRA KUTI MOISTURE YAPINDA MUGirazi RINOBVA KUFEKITI UYE KUTI RISINGAKONZESWE KANA KUTI RINOGONESA. HAPANA KUKOSHA ROTI NDINE Pfungwa…. KUZVIDZIDZISA PAMUSORO PAMABHUKU ANOPFUURWA SILICA GEL KUTI UONE KANA ZVICHIBATSIRA KADUKU KUKWENDA KUSVIRA MUZVINHU NDE NDODA KUEDZA… KWEDZERA!
Jose L Mainieri F akadaro
Mushure mechinguva mushure mekunge yangu 27-inch iMac yaifamba yakatenderedza imba yangu (sekuipa kwandakaita kumukadzi wangu), ndakaona kuti mavara emucheto wekurudyi aipera ega. Izvi zvakaita kuti ndifunge nezve mukana wekuti maronda akasimba aive chibereko che "magnetization" yechiratidziri, semhedzisiro yekuti munzvimbo yakapfuura mune michina yakawanda yemagetsi, asi kunyanya, vashoma vatauri vekumba yemitambo, redhiyo zvishandiso, uye angangoita mana suwoofers. Zvese izvo zvechokwadi hazvipo munzvimbo iyo mukadzi wangu anoshandisa iyo iMac.
Iyo iMac nyowani yave iri munzvimbo imwechete uye mamiriro seye yekare kweinenge mwedzi mitanhatu, uye kusvika parizvino haina kuratidza chero matambudziko ekutsvaira. Zvinogona kunge kuti iMac yakakanganisika ine degaussing degaussing system, kana sisitimu yakadaro iripo pamhando iyi yechiratidziro, sezvinoitika kuma cathodic monitors uye materevhizheni.
Muchiitiko chekuti hunyoro hwapinda mukati mekutarisa, nekushandisa jira nyoro kuichenesa, ndinokurudzira kuti utarise sarudzo mbiri panjodzi yako wega: 1) Kune mamwe emagetsi zvikamu zvekunyorova zvinobvisa mwaya. Iwe unogona kuyedza kuisa zvishoma kune chidiki chikamu chemucheto kwechidzitiro uye woona mhedzisiro mushure mekumirira maawa mashoma, usati wadzosera michina kumashure. 2) chimwe chinhu chekare, chingave chekuisa kupisa neyekuomesa bvudzi pakadzika, kana kuisa chidzitiro padhuze nechaidziya nzvimbo kana zvirinani, dehumidifier.
Wandaishanda naye uyo akanyora kuti dambudziko richaramba riripo chero mamiriro ekunze akasachinja ari ... Ini ndinogona zvakare kuwedzera ese mamiriro ezvinhu, senge kupindira kana kunyanyisa kana kuvhara magnetism.
Pindura kuna Jose L Mainieri F
Ini ndakave ne iMac yeanenge uye ini ndanga ndinewo dambudziko, kana iwo matambudziko, sezvo paine maviri, rimwe, kushomeka kwekubvumidzwa kana kuiswa chisimbiso kwegirazi rekunze, munzvimbo dzinotonhora zvakanyanya uye kunyanya, uko vanhu vanosvuta, kuputa inopinda / kana hunyoro uye inosvibisa girazi nedento. Izvi zviri nyore kugadzirisa sekutsanangura kweshamwari yedu jaka101 pamusoro, vhidhiyo inosanganisirwa. Asi iro chairo dambudziko kugadzirisa kwehunyoro nekuda kwekupisa kunogadzirwa nemidziyo yemukati senge: sosi, hard disk, fan mota, nezvimwe. Kugadzirisa izvi kana iwe usina icho pasi pevimbiso, pano ini ndinokusiira iwe chimwe chinhu chave chakandinakira kwazvo, chakati kurei, asi nekushivirira zvishoma uye nemaoko akanaka zvinogadziriswa. Tarisa apa http://www.macuarium.com/cms/macu/guias/index.php?option=com_remository&Itemid=169&func=fileinfo&id=418
Icho chinetso icho Apple isingade kuteedzera, asi zvirokwazvo kune izvo chero zvigadzirwa zvinoshandiswa, tinovimba vari kuzvigadzirisa.
Rombo rakanaka kune wese munhu.
Chinyorwa chekuchenesa matanga kubva pamoto unogadzirwa nezvinhu zvemukati zveMac, chakazara uye chinonakidza, kunyangwe ini pachangu, ndingadai ndakanetseka kusarudza kuzviita. Dai muchina waive pasi pewarandi, ndaisiya basa iri kune maApple mahunyanzvi. Uye kana garandi yacho yanga yatopera, ini ndaizofunga kuve neaya mahunyanzvi vanoita basa iri. Nenzira, ini ndaizotora iwo mukana kukumbira yekuomesa dhiraivha kuenda ku2 TB, kana zvichibvira uye imwe pfungwa yekudzivirira kuti dambudziko remavara rinoramba riripo, kana chinhu chakadai chiri mumaoko ako. Zvinosuruvarisa, chero munhu akanyora chinyorwa ichi, akavimbisa chikamu chechipiri, kwaaizotsanangura nzira yekudzivirira mavanga kuti asazowoneka, asi ini handina kuona kana kuwana chikamu chechipiri, icho chingave chinobatsira zvakanyanya, asi kuti ndione kana nekusvika kusvika iMac.
Zviri nyore kwazvo kuchenesa, zvekuti unofanirwa kuunza mubhuku racho. Mutengo wakadii wavanazvo, ivo havakuudze kuti ungauchenesa sei kuti ugone kufonera technical service nekukuchaja iwe "mafuro"
Thanks ndaive ndave kutofunga zvekufonera appel for the garandi.
Mhoroi, chimwe chinhu chinoitika kwandiri pane iMac yandisingazive kana ichienderana nehunyoro: pandinoibatidza, skrini rese rinowoneka nevhavha chena, pandinoiisa pakurara uye chinguva chidiki gare gare ndinodzvanya mbeva kuiburitsa muhope, ndizvozvo!, iyo skrini inotaridzika zvakanaka uye chifukidzo chemukaka chaenda. Pane chero munhu anoziva kuti nei izvi zvakafanira? Zvakaitika kune mumwe munhu? Wakazvi gadzirisa sei? ... Ndatenda zvikuru pamberi.
Akanaka Fatima, iMac yauinayo ndeipi gore? Kana pasina munhu anokupa mhinduro, unogona kufonera Apple zvakananga, vanogona kukupa tsananguro yekuti nei. Ndinovimba uchazvigadzirisa munguva pfupi, kukwazisa.
Mhoro, ndatenda zvikuru nekundipindura. Ndichafonera Apple sekutaura kwako; komputa iri kubva muna 2009. Ndinovimba ndichagadzirisa munguva pfupi. Kwaziso.
Kutenda iwe uye kana iwe uchiziva chimwe chinhu, tiudze 😉
Ini ndangoyedza hunyengeri nekuti ini ndaive nedzimwe nzvimbo pachiratidziri, ndaifunga kuti yaive nechisimbiso chakanaka saka ndaisaziva zvekuita, ndakaverenga chinyorwa ndokuchiedza nekombi gps yekukweva kapu. Panguva iyo iyo skrini yakauya, ini ndaigona kuichenesa uye inoiswa. Zvakanditorera maminitsi mashanu kuti ndizviite. Ndatenda.
Yiya rangel akadaro
Ndine dambudziko neMacBook Pro, mazuva mashoma apfuura ndakaona kuti pane chena hombe yakaonekwa pachiratidziri. Ini handizive kuti nei iko kukanganisa kuri kukonzerwa, Mac yangu haisisiri pasi pewarandi.
Handina kuidonhedza, handina kuiburitsa kuzuva, handisi kuwana mhosho yandakaita kuti banga iri rionekwe. Ndinovimba munogona kundiudza chimwe chinhu, ndinokutendai zvikuru nekutarisa kwenyu.
Pindura kuna Yiya Rangel
Mhoro! Chidzitiro cheImac yangu inoita kunge inopenya mumakona ekumusoro nepakati, chinoonekwa chete kana chadzimwa; chichava chii?
Iwe uri kutsemuka. Maawa maviri achipa skrini, uye pakupedzisira anozvigadzirisa nekuigeza nemidziyo. rarama iwe!
Joseph Jesu akadaro
Ndine 21,5 ″ tafura mac yanga ichishanda zvakanyatsonaka, ndichigadzirisa neyekupedzisira, uye adobe premiere cs6, nguva pfupi yadarika iyo skrini yakatanga kudzadzarika dzimwe nguva, uye zvaive zvakajairika kuti ini ndine yekuwedzera skrini pandinoona iwo maratidziro echirongwa chekugadzirisa.
Mazuva matatu apfuura skrini yemac yangu yakadzima uye iyo yekuwedzera ichienderera ichishanda ichiratidza chirongwa chekugadzirisa, inondiudza kuti mac inoshanda zvakajairika asi nekombuta yakavharwa, pandinoibatidza pachiringa ichingobwaira uye inoramba iri nhema, ichisara chete iyo yekuwedzera skrini. Nguva nenguva inotenderera asi kwete nekupenya kwainofanirwa kuve nako, haina opaque, ini ndinodzvanya makiyi ekupenya uye ari pakakwirira, ini ndinodzvanya kiyi yekupenya yepazasi uye iyo skrini inodzima.
Chii chinogona kuitika kadhi revhidhiyo kana skrini rakakuvadzwa? Ndamhanya chirongwa chekuongorora asi hachitaridze chero kukuvara.
Pindura kuna Jose Jesu
uri murume wemuchina!
Ndakatenderedza IMAC yangu kuti nditore mifananidzo, pakarepo ndakaona gwapa jena iro rakaita kuti vasvike mumifananidzo, uye rakakura. Ndakaidzima ndikachinja nzvimbo mhute iyi yakanyangarika. Ndiri kuzoedza kuichenesa. Asi mubvunzo wangu ndouyu, ndinogona kuufukidza nemachira? Nekuti ini ndine hunyoro mune ino saiti asi muchikamu icho chakaomeswa nemhepo uye saka chakavharwa, chichava chikonzero chekukuvara.
Louis mantione akadaro
IMAC yangu yakatengwa muna2008, inoshanda mushe, asi pane zvinhu zviviri zviri kundinetsa, iyo yekutanga: iyo CD drive inosanganisirwa, pandinoisa CD mairi yakamira uye haibude neimwe nzira. , uye hapana akakwanisa kundibatsira nekuti zvinoitika kuti iwe unofanirwa kurisunungura uye komputa iri hermetic !!!!!, uye iyo yechipiri: zvigamba kana mavara matema ari kutanga kuoneka pachiratidziri! izvo zviri kuvhara iyo skrini asi zvinowoneka uye zvinonyangarika zvega, NDIANI ANGANDIBATSIRA !!!!!
Pindura kuna Luis Mantione
Bravo yemhinduro, iwe wakurumidza uye nyore kubvisa kusandifarira kwakanaka kubva kwandiri.
Ndinokutendai zvinoshamisa, kwaingova kubvisa girazi uye banga rakanyangarika nemashiripiti
Rutivi rwakajeka rweApple's KeyNote paMacWorld 2009